Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » UNyulo lokutshintsha umdlalo we-UNWTO: Luza kusebenza njani ngoku?
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ICosta Rica Iindaba eziDlayo • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
Usuku olutsha loKhenketho lweHlabathi! Usuku olutsha lwe-UNWTO! Usuku olutsha loKhenketho lwaseCosta Rica! Ihlabathi lezokhenketho likwinguqu yomdlalo kunye neCosta Rica ekhokelayo kwinkqubo yonyulo oluzayo kwi-UNWTO General Assembly eMadrid.
namhlanje Obekekileyo. UGustav Segura Costa Sancho, umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica wayebeke intamo yakhe ekuceleni ngokusemthethweni ivoti yokuvota eyimfihlo yokuqinisekiswa kwakhona kukaNobhala-Jikelele we-UNWTO kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO ezayo nge-3 kaDisemba 2021.
Esi sicelo siya kuphelisa ukuqinisekiswa kwe-SG ngesicelo. Eli nyathelo lelokuqala kwimbali ye-UNWTO, kunye nokutshintsha umdlalo.
Yintoni eya kwenzeka ukuba uNobhala-Jikelele okhoyo uZurab Pololikashvili akayi kufumana iivoti ezifunekayo ze-2/3 ukuze ziqinisekiswe kwelinye ixesha? Inkqubo echanekileyo ichazwe kweli nqaku - kwaye ilula!
Kwinyathelo elothusayo namhlanje, uMhlonishwa oHloniphekileyo. UGustav Segura Costa Sancho, umphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica wamfudusela kunye nelizwe lakhe kwisihlalo somqhubi soKhenketho lweHlabathi.
Egameni likarhulumente wakhe, wafuna ngokusemthethweni ivoti yokuvota eyimfihlo ukuxhasa isindululo seBhunga lesiGqeba esiLawulayo ukuqinisekisa uNobhala-Jikelele we-UNWTO kwelinye ixesha. Le voti iya kwenzeka ngoDisemba 3, 2021 kwi-UNWTO General Assembly ezayo eMadrid.
Abefundisi abaninzi babenethemba lokuba eli nyathelo laliza kwenzeka, kodwa akukho namnye owayenenkalipho yokukhupha intamo yakhe okanye kwanokucatshulwa.
Ekuboniseni ubunkokeli obuyinyani kunye nokuzinikela kukhenketho lwehlabathi, uMhlonishwa. UGustav Segura Costa Sancho namhlanje wenze into abaninzi bebenethemba lokuba iya kwenzeka, kodwa akukho mntu wayefuna ukuqalisa.
Ukuthathela ingqalelo ingxaki eqhubekayo ye-COVID-19 yenza ukuba kube ngumceli mngeni kumazwe amaninzi ukuba athumele umphathiswa wabo wezokhenketho okanye abathunywa eMadrid, eli nyathelo lenkalipho leCosta Rica liya kukhuthaza abanye ukuba balandele lo mzekelo.
Uthatho-nxaxheba olufanelekileyo alufuneki kuphela kwikhoram, kodwa ukuqinisekisa unyulo olunobulungisa nolugqibeleleyo lwamalungu e-UNWTO. Ukuthathela ingqalelo ukhenketho luhamba kweyona ngxaki inzima, ubunkokeli obulungileyo nobomeleleyo buya kunceda ilizwe ngalinye, uqoqosho lwalo, imisebenzi kunye nemigaqo-nkqubo.
Kufuneka kuqatshelwe, ukuba iCosta Rica iyabuza, ukuba ukutyunjwa kukaNobhala-Jikelele Ithuba elisusela ku-2022-2025 liya kwenziwa ngevoti eyimfihlo yawo onke amalungu akhoyo nasebenzayo njengoko kuchaziwe kwimimiselo. Esi sicelo siyakunyanzeliswa ukuba umgaqo ukuba ubudlelwane phakathi States / UNWTO, iCosta Rica yathi kwileta yakhe kwi-UNWTO Secretariat ngoNovemba 15.
Isilumkiso: Ibhalothi eyimfihlo ayithethi “iBhalothi ye-elektroniki.”
eTurboNews ifumene esi silumkiso namhlanje kwilungu lesangqa sangaphakathi kunye ne-UNWTO yangaphakathi enolwazi oluneenkcukacha. Uxelele eTN..
Ingozi phakathi kwephepha lokuvota lemveli kunye nevoti ye-elektroniki!
Ingxoxo ephambili kaNobhala-Jikelele kukwenza kube lula kumalungu ukuba avote kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo esebenzisa inkqubo yokuvota ye-elektroniki.
Okubangela umdla kukuba, uNobhala Jikelele wangoku wenza isindululo esifanayo Umba we-Ajenda 16. Lo mba ucebisa utshintsho kwimigaqo yenkqubo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo (A/24/16).
Izizathu zokuba kutheni uNobhala Jikelele wangoku enokukhetha le ndlela zicacile:
Iivoti kunye nababaleki azinakuguqulwa njengoko inkqubo iphicothwa ukusuka ku-A ukuya ku-Z.
Ivoti ye-elektroniki ayinakuphicothwa.
Iivoti ze-elektroniki zisenokwenziwa lula yi-Secretariat, njengoko zilawula izixhobo zenkqubo yokuvota. Uvoto olunjalo alunakuqinisekisa ukuba ivoti iyimfihlo. Isenokubeka uxinzelelo kuloo mazwe ekusenokwenzeka ukuba anike isiqinisekiso somlomo, kodwa efuna ukuthabatha ikhondo elahlukileyo.
Kuya kwenzeka ntoni ukuba uNobhala Jikelele uZurab Pololikashvili akazange aqinisekiswe ngoDisemba 3?
Ukuba iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ayiwamkeli isindululo esenziwe liBhunga lesiGqeba esiLawulayo kwisikhundla sikaNobhala Jikelele woMbutho.
I-GA iya kuyalela iBhunga eliLawulayo kwiseshoni yayo ye-115 eya kubanjelwa eMadrid, eSpain, ngoDisemba 3, 2021, ivule inkqubo entsha yokunyulwa koNobhala Jikelele woMbutho.
Uyalela iBhunga lesiGqeba esiLawulayo ukuba inkqubo enjalo yonyulo inethayimthebhile ubuncinane yeenyanga ezintathu kunye nobuninzi beenyanga ezintandathu, ukususela kumhla wokuvulwa kwenkqubo yonyulo.
Uyalela uMongameli weBhunga eliLawulayo kunye noNobhala Jikelele wentlangano ukuba babize i-116th Executive Council kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo engaqhelekanga, ngoMeyi 2022, kwindawo kunye nomhla oza kuchazwa.
Amagama njengoNobhala Jikelele weThutyana le-Ad, uMnu. Zhu Shanzhong, uMlawuli oyiNtloko, oya kuthatha imisebenzi enjalo ngokubambisana noMongameli weBhunga eliLawulayo, ukuqala ngo-1 kaJanuwari 2022.
Inkqubo kunye nekhalenda yonyulo lukaNobhala-Jikelele woMbutho kwixesha eliphakathi kwama-2022-2025.
Disemba 3, 2021: Ukuvunywa kwenkqubo yonyulo kunye nethayimthebhile kwiseshoni ye-115 yeBhunga eliLawulayo eMadrid, eSpain.
Disemba 2021Isibhengezo sesithuba esiza kuthunyelwa kwiwebhusayithi ye-UNWTO kwaye uqaphele ukuba i-verbale iya kuthunyelwa kuwo onke amaLungu abonisa umhla wokugqibela wokwamkelwa kwezicelo.
11 Matshi 2022 (umhla wokuqinisekiswa): Umhla wokugqibela wokufumana izicelo, oko kukuthi, iinyanga ezimbini ngaphambi kokusungulwa kweseshoni ye-116 yeBhunga eliLawulayo eMadrid, eSpain, ngomhla we-11 ngoMeyi 2022 (umhla wokuqinisekiswa).
Xa kuvulwa ngokusesikweni abaviwa, abaviwa baya kwaziswa malunga nokuchaneka ngokusemthethweni kwabaviwa.
11 April 2022 (umhla uya kuqinisekiswa): Makukhutshwe amazwi elizwi abhengeza abagqatswa abafunyenweyo (umhla wokugqibela wokusasazwa kwabagqatswa ziintsuku ezingama-30 zekhalenda phambi kokumiselwa kweseshoni ye-116 yeBhunga).
Ngomhla we-11-12 kuMeyi 2022 (imihla yokuqinisekiswa): Ukukhethwa komtyunjwa liBhunga lesiGqeba esiLawulayo kwiseshoni yayo ye-116 eya kubanjelwa eMadrid, eSpain, isixeko esikomkhulu loMbutho.
13 May 2022: Unyulo loNobhala-Jikelele kwixesha le-2022-2025 kwiseshoni engaqhelekanga yeNdibano Jikelele eya kubanjelwa eMadrid, eSpain.
Imithetho, Iinkqubo kunye noshicilelo oluncinci:
Tyena iNdibano Jikelele:
Inkqubo yoNyulo lukaNobhala-Jikelele we-UNWTO:
Unyulo lukaNobhala-Jikelele we-UNWTO lunezigaba ezibini:
Inkqubo yonyulo kwiKomiti eLawulayo apho, ekufumaneni abagqatswa, iBhunga eliLawulayo livotela UKUNCOMBISA kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo umgqatswa.
Umgqatswa ocetyiswayo uvunyiwe (okanye hayi) yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
ISiqendu 22 seMithetho ye-UNWTO imisela ngokucacileyo ukuba unyulo lukaNobhala-Jikelele kufuneka luthathwe sisibini kwisithathu samalungu asebenzayo nakhoyo ngoku:
Kwangaxeshanye, iSiqendu 38, umhlathi 2, udash e) weMigaqo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo, sithi unyulo lukaNobhala-Jikelele luya kwenziwa sisininzi sesibini kwisithathu samalungu akhoyo ngoku nasebenzayo.
Kamva, isiqendu 43 seMithetho yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo ichaza ngokucacileyo ukuba unyulo kufuneka lwenziwe ngu ivoti eyimfihlo.
Bekusisiko ukuba kunyulwe uNobhala-Jikelele ngokumncoma, kodwa oku akumiselwanga kwimigaqo yangoku, lisiko.
Ukuba elinye iLizwe eliLungu liyabuza ukuze unyulo lwenziwe ngevoti eyimfihlo, oko kwanele ukushiya isiko lokwazisa kwaye uqhubeke nokuvota okuyimfihlo kwawo onke amalungu akhoyo nasebenzayo.
Ukuze onyulwe okanye onyulwe kwakhona, umgqatswa ocetyiswe liBhunga elinoLawulo oluPhezulu, kufuneka afikelele kwi-2/3 yawo onke amalungu akhoyo nasebenzayo awokuvota.
Ukuba akukho kunyulwa kwakhona kukaNobhala-Jikelele, iNdibano yeZizwe eziManyeneyo iya kuthatha isivumelwano kwi-ajenda ye-9 yoNyulo lukaNobhala-Jikelele, apho iyalela iBhunga lesiGqeba esiLawulayo ukuba livule inkqubo entsha yokutyunjwa kweSigqeba esiPhezulu. UNobhala-Jikelele we-UNWTO.
Inqaku lama-22 leMithetho ye-UNWTO lifundeka ngolu hlobo:
“UNobhala-Jikelele uya kunyulwa sisininzi sesibini esithathwini saMalungu aPheleleyo akhoyo kwaye avota kwiNdibano, ngokwesindululo seBhunga, isithuba seminyaka emine. Ukumiselwa kwakhe kuya kuhlaziywa.”
Ixesha lokuba sesikhundleni kukaNobhala Jikelele ukhoyo ngoku liphela nge-31 kaDisemba 2021. Ngoko ke luxanduva lweNdibano yeZizwe eziManyeneyo ukuba inyule uNobhala Jikelele wesithuba esiphakathi kuka-2022-2025 kwiseshoni engaqhelekanga efanele kubanjwa kunye nomhla oza kubanjwa ngawo. igqitywe ngo-2022.
Ngako oko, ngokungqinelana neSiqendu 22 seMithetho kunye noMgaqo wama-29 weMigaqo yeNkqubo yeSigqeba soLawulo, iBhunga elinoLawulo oluPhezulu liya kufuneka kwiseshoni yalo ye-116 (11-12 May 2022)imihla eya kuqinisekiswa)) ukucebisa umtyunjwa kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo. Olu xwebhu lubonelela ngenkqubo kunye nethayimthebhile yolo nyulo.
Ngenjongo yolu nyulo, kucetywa ukuba kulandelwe inkqubo esekiweyo kwaye, ngakumbi, oko imithetho eyamkelwa liBhunga kunyulo lomtyunjwa kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele kwiseshoni yayo yamashumi amabini anesithathu ngoMeyi 1984 (isigqibo 17(XXIII)), songezelelwe ngabo bamkelwa kwiseshoni yayo yamashumi amathathu anesine ngoNovemba 1988 (isigqibo 19(XXXIV)), nakwiseshoni yayo yamashumi amane anesine ngoNovemba 1992 (isigqibo 19(XLIV)) qaphela.
Le migaqo ikhankanywe apha ngasentla, ebisoloko isenza isicelo sokutyunjelwa isikhundla sikaNobhala-Jikelele ukususela ngo-1992, ibonelela ukuba:
“(a) kuphela ngabemi bamazwe angamalungu e-WTO abanokuba ngabagqatswa;
(b) abagqatswa baya kucetywa ngokusesikweni kwiBhunga, ngeOfisi kaNobhala, ngoorhulumente baMazwe angabemi bazo, kwaye ezi ziphakamiso kufuneka ifunyenwe ungadlulanga (umhla uya kumiselwa), uphawu lweposi olubonisa ubungqina boko;
“(c) ukuvota kuya kuqhutywa ngevoti eyimfihlo ngokungqinelana neMimiselo yesiKhokelo yokuQhutywa koNyulo ngeBhalothi efihlakeleyo eqhotyoshelwe kwiMigaqo yeNkqubo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo;
“(d) ivoti iya kugqitywa ngokungqinelana neSiqendu 30 seMithetho kunye noMgaqo wama-28 weMigaqo yeNkqubo yeBhunga, ngesininzi esilula, esichazwa njengeepesenti ezingamashumi amahlanu kunye nelinye lamavoti asemthethweni;
“(e) Ukukhethwa komntu omnye otyunjwe liBhunga kuya kuqhutywa, ngokungqinelana noMgaqo wama-29 weBhunga leMigaqo yeNkqubo, ngexesha lentlanganiso yabucala, ekuya kuthi inxalenye yayo ibe yintlanganiso yothintelo, ngolu hlobo lulandelayo:
“(i) iingxoxo zabagqatswa ziya kuqhutywa ngexesha lentlanganiso yabucala ethintelweyo ekuya kubakho kuyo abathunywa neetoliki kuphela; akusayi kubakho rekhodi libhaliweyo kwaye akukho teyiphu irekhodiweyo yeengxoxo;
(ii) ngexesha lokuvota abasebenzi bakaNobhala abayimfuneko ukuncedisa ekuvoteni baya kwamkelwa;
“(f) IBhunga leSigqeba lenza isigqibo sokungamcebisi umgqatswa ocetywe ngurhulumente weLizwe elililungu ngasemva ngasemva (umhlathi we-12 weMithetho yezeMali ehlonyelwe kwiMithetho);
(g) iBhunga liya kunyula umtyunjwa abe mnye kuphela oza kucebisa kwiNdibano.
Ukongeza, inkqubo esekiweyo yokwamkelwa kwamagama abatyunjiweyo ethe yasetyenziswa ukususela ngo-1992 ibonelela ngoku kulandelayo ngokubhekiselele ekunikezelweni kolonyulo:
“Ngamnye utyumbo kufuneka lukhatshwe yi-curriculum vitae kunye nenkcazo yomgaqo-nkqubo nenjongo yolawulo, evakalisa izimvo zomtyunjwa ngendlela aya kwenza ngayo imisebenzi kaNobhala-Jikelele. Ezi nkcukacha ziya kuqulunqwa ngohlobo loxwebhu lweBhunga kwaye zichazwe kuMalungu alo ngexesha elimiselweyo.
“Ngenjongo yokugcina ukulingana phakathi kwabatyunjwa kunye nokuqinisekisa ukuba amaxwebhu abo ayafundeka, kucetyiswa ukuba i-curricula vitae iphelele, sithi, amaphepha amabini kunye neenkcazo zomgaqo-nkqubo nenjongo yolawulo kumaphepha amathandathu. Ulonyulo luya kuchazwa ngokulandelelana kwealfabhethi kuxwebhu lweBhunga.”
Ukusukela ngo-1992, ixesha elibekiweyo lokufumana abagqatswa (apho urhulumente ohambelanayo axhasa khona, i-curricula vitae kwaye iingxelo zenjongo kufuneka zincanyathiselwe ngokwenene) isekwe kwiinyanga ezimbini phambi kweseshoni apho iBhunga elinoLawulo oluPhezulu kufuneka likhethe umtyunjwa. I-Ofisi kaNobhala yazisa onke amaLungu ngenqaku lelizwi xa efunyenwe ulonyulo ngalunye.
Ukusukela ngo-1997, abo batyunjelwe unyulo kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele benze intetho yomlomo malunga nokugqalwa kwabo kunye neenjongo zabo ngexesha leseshoni yolonyulo yeBhunga. Ebizwa ngokulandelelana kwealfabhethi yeSpanishi yeefani zabo, abatyunjwa babelwa ixesha elilinganayo lokwenza iintetho zabo ezingalandelwa ziingxoxo.
Ngokuhambelana noMgaqo wama-29(3) weMigaqo yeNkqubo yeSigqeba esiLawulayo, isindululo kwiNdibano yomntu otyunjelwe ukutyunjelwa kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele: “iya kwenziwa ngesininzi saMalungu eBhunga akhoyo kwaye avotayo2. Ukuba akukho mgqatswa ufumana isininzi kuvoto lokuqala, okwesibini kwaye, ukuba kuyimfuneko kuya kubanjwa uvoto olulandelayo ukuze kuthathwe isigqibo phakathi kwabagqatswa ababini abafumana elona nani likhulu leevoti.”
Ngokuhambelana nenkqubo eqhubekayo yoMbutho, ekhunjulwa kwisigqibo se-17 (XXIII) sika-1984, isininzi esilula "sichazwa njenge-50 pesenti kunye nenye yevoti esebenzayo". Lo mgaqo uqinisekisiwe kwi-1988 kunye ne-1992 (izigqibo ze-19 (XXXIV) kunye ne-19 (XLIV)). Kwimeko yenani elingumnqakathi, likhangeleka lihambelana nengqiqo, kunye nentsingiselo eqhelekileyo yamagama kunye nesenzo esibalaseleyo, ukulichaza kunokuba limele inani leevoti ngokukhawuleza ngaphezu kwesiqingatha seevoti ezifakwe ngokusemthethweni.3.
Ngokubhekiselele kwiinkqubo "zesibini" kunye "nevoti elandelayo" ekhankanywe kuMgaqo we-29(3), ukuba zibonise ukuba ziyimfuneko, ingcaciso ebonelelwe nguMcebisi wezoMthetho kwiNgcaciso yoLwazi loNyulo lukaNobhala-Jikelele kwi-1989 kwaye yaqinisekiswa. ngo-2008 (16(LXXXIV)) baya kwenza isicelo kwimeko apho abagqatswa ababini banokungena kwindawo yesibini kwibhalothi yokuqala. Isiphumo siya kuba kukuba olunye uvoto (kwaye uninzi olongezelelekileyo kangangoko luyimfuneko ukuze kufikelelwe isininzi esifunekayo) luya kucwangciswa phakathi kwabagqatswa abathathu ukuze kuthathwe isigqibo sokuba ngabaphi abagqatswa ababini, abafumene elona nani likhulu leevoti, abaya kuthi emva koko bathabathe inxaxheba kuvoto lokugqibela.
Ukumelwa koMbuso lelinye iLungu eliPheleleyo loMbutho ngexesha lonyulo lomtyunjwa kuya kulandela izigqibo ezamkelwa yiNdibano yeZizwe eziManyeneyo kwiseshoni yayo ye-19 kwiRiphabhliki yaseKorea ngowama-2011 (isigqibo 591(XIX)), kwiseshoni yayo yama-20 I-Zambia / iZimbabwe kwi-2013 (isigqibo se-633 (XX)) kunye neseshoni ye-21 eColombia kwi-2015 (isigqibo 649 (XXI)).
Kuyakhunjulwa ukuba aMalungu apho iSiqendu 34 seMithetho kunye nomhlathi we-13 weMithetho yezeMali eqhotyoshelwe kwiMithetho isetyenziswa ngexesha lonyulo ahluthwa amalungelo obulungu ngendlela yeenkonzo kunye nelungelo lokuvota kwiNdibano. kunye neBhunga ngaphandle kokuba banikwe ukukhululwa okwethutyana ekusetyenzisweni kwaloo migaqo yiNdibano.
Inkqubo echazwe kolu xwebhu isetyenziswe ngempumelelo, kwaye ngaphandle kokuvelisa ubunzima obuthile, ekuqeshweni okuqhutywe ukususela ngo-1992.
Ngokuhambelana neengcebiso zeYunithi yoHlolo oluHlangeneyo lweZizwe eziManyeneyo (i-JIU) ngokumalunga nokukhethwa kunye neemeko zenkonzo yeeNtloko eziLawulayo kwi-United Nations System Organisations (JIU/REP/2009/8), umfaki-sicelo ngamnye uyacelwa ukuba aqhoboshele. isatifikethi sempilo entle esisayinwe liziko lezonyango elaziwayo xa ebonisa umgqatswa wakhe njengoko kuchaziwe kumhlathi wesi-6.
Njengoko kubonelelwe phantsi koMgaqo wama-27(2), igama elithi “Amalungu akhoyo kwaye avotayo” liya kuqondwa lithetha “Amalungu akhoyo kwaye avotela okanye achasayo”. Ke ngoko, ukurhoxa kunye neevoti ezingenanto ziya kuthathwa njengokungavoti.
Amanyathelo aza kuthathwa liBhunga lesiGqeba
Ibhunga lesiGqeba liyamenywa:
Ukwenza isigqibo sokuba imigaqo eyamkelwa liBhunga ekukhetheni umntu oza kutyunjelwa isikhundla sikaNobhala Jikelele kwiseshoni yayo yamashumi amabini anesithathu ngoMeyi 1984 (isigqibo 17(XXIII)), incediswa yileyo yamkelwe kwiseshoni yayo yamashumi amathathu anesine kwintlanganiso yeSigaba 1988. Novemba 19 (isigqibo 1992(XXXIV)), nakwiseshoni yayo yamashumi amane anesine ngoNovemba 19 (isigqibo 105(XLIV)) siya kuqwalaselwa kwakhona kwiseshoni yayo ye-XNUMX;
Ukuqinisekisa ukuba, ukutolikwa kwemigaqo emiselwe ngokomthetho elawula unyulo lukaNobhala-Jikelele kunye nezigqibo ezikhankanywe kumhlathana (a) apha ngasentla, kuya kuthethwa ngokubhalwe kolu xwebhu;
Ukumema aMazwe angamaLungu ukuba acebise abagqatswa kwisikhundla sikaNobhala-Jikelele kwixesha le-2022-2025, ukuqinisekisa ukuba amagama abo atyunjiweyo afikelela kwiKomkhulu loMbutho (uCapitán Haya 42, 28020 Madrid, eSpain) kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokusungulwa kweseshoni ye-116. iBhunga lesiGqeba esiLawulayo, oko kukuthi, ngentsimbi ye-24:00 iiyure ixesha laseMadrid, ngowe-11 Matshi 2022 (umhla oya kuqinisekiswa), okwangoku;
Ukucela abagqatswa ukuba bangenise, kunye nenkcazo ngobomi kunye neenkcukacha ngamakhondo omsebenzi, inkcazo yomgaqo-nkqubo nenjongo yolawulo, bevakalisa izimvo zabo ngendlela abaya kwenza ngayo imisebenzi kaNobhala-Jikelele; kwaye
Ukuqinisekisa ukuba iseshoni ye-116 yeSigqeba esiLawulayo iya kukhetha umtyunjwa ekufuneka indulule kwiseshoni engaqhelekanga yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo kwisikhundla sikaNobhala Jikelele woMbutho kwisithuba sowama-2022-2025.